Guddiga hirgalinta doorashooyinka heer federal ee maamulka Koonfur Galbeed oo maanta dib ugu laabtay Baydhabo – Kalfadhi
Guddiga hirgalinta doorashooyinka heer federal ee maamulka Koonfur Galbeed oo maanta dib ugu laabtay Baydhabo
January 5, 2021 Hassan Istiila
Xubno ka tirsan guddiga hirgalinta doorashooyinka dowlad-gobaleedka Koonfur Galbeed oo maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ku joogay magaalada Mogadishu, ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhab.
Guddiga ayaa Mogadishu waxaa ay uga qeyb-galeen tababaro ku saabsan habraacyada doorashooyinka iyo qaabka ugu wanaagsan ee deggaanada Koonfur Galbeed ay uga qabsoomi laheyd doorashada labada gole ee Baarlamaanka, iyada oo la tixraacayo heeshiiskii iyo haabraacyadii kasoo baxay shirkii Mogadishu.
Guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgalinta dooradhooyinka Koonfur Galbeed ahna ku-simaha Guddoomiyaha guddiga Nuuradiin Ibraahim Aadan, oo si kooban uga warbixinayay ujeedka safarkooda iyo howlihii u soo qabsoomay ayaa carabka ku adkeeyay in guud ahaan guddiga ay qabteen shaqooyin muhiim ah isla markaanna ay kulamo ka qaateen qaar kamid ay daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya.
Xubnaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa dhowaan magaalada Baydhaba, ka bilaabi doonna howlaha doorashooyinka, iyadoo ay xusid mudantahay in guddiga wali uu ka taaganyahay muran.
Madaxweynaha Galmudug iyo wakiilka QM oo ka wadda-hadlay xalinta tabashooyinka heshiiskii doorashada
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Khartuum